ယနေ့ည ပြည်တွင်းသတင်း (၁၉-၄-၂၁)… – PVTV Myanmar
ယနေ့ည ပြည်တွင်းသတင်း (၁၉-၄-၂၁)
Like – 17K Share – 1988
MoeSi Thu says:
Ko Ko Hector says:
2021-04-19 at 7:13 PM
Tv channel ရေအာင္လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္ နယ္ေတြအတြက္က် NUGရဲ့သတင္းေတြ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္ က်ေနာ္တို႔ရြာဆို အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔pတာေတာင္မသိၾကတဲ့သူေတြမွ အမ်ားႀကီး
Tun Aung Lin says:
2021-04-19 at 7:15 PM
ထောက်ခံပါတယ် ၊ ကျေနပ် အားရ ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ် ☺️
Thuya Tun says:
2021-04-19 at 8:16 PM
Radio လိုင်းတစ်ခု လုပ်စေချင်ပါတယ်။
Ai Dam RKar says:
MRTV လေသံနဲ့ မတင်ဆက်ပါနဲ့လား။ တောင်းဆိုပါတယ်။ ပိုကောင်းစေချင်လို့ပါ။
အလင်းသစ် သစ် says:
အ​ရေး​တော်ပုံ မုချ ​အောင်ရမည်✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊💪🤝💪🤝💪🤝💪💪🤝💪🤝💪🤝🤝💪🤝💪🤝💪💪🤝💪🤝💪🤝💪🏆
Khin Kyawt Nandar Soe says:
2021-04-19 at 9:09 PM
2021-04-19 at 9:26 PM
သတင်းတင်ဆက်မှု ပိုမိုထိရောက် ထက်မြက်ဖို့ ကြိုးစားပေးပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နွေဦး ဘုရင် says:
2021-04-19 at 9:50 PM
English subtitles ထည့်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်။ Youtube မှာပြန်တင်ကြဖို့အတွက်
Aung Zay says:
2021-04-19 at 9:51 PM
ကျေးဇူးပြုပြီး သတင်းအကျဉ်း စာလေးပါ ထည့်ပေးဖို့ အားမနာတမ်း အကူညီတောင်းပါရစေ ခင်ဗျ
ကျနော်တို့ဆီမှာ Video file ကြည့်နိုင်လောက်အောင် connection အဆင်မပြေလို့ပါခင်ဗျ
2021-04-19 at 9:56 PM
2021-04-19 at 10:12 PM
အရေး တော်ပုံ အောင် ရမည်
2021-04-19 at 10:33 PM
We support you, We believe you and We watch you.
2021-04-19 at 10:34 PM
PV tv ထုတ်လွှင့်မှု
ကိုမိုး ကြာအိုင်မြေ says:
2021-04-19 at 11:15 PM
2021-04-20 at 9:42 AM
U Myint Soe says:
2021-04-20 at 9:44 AM
2021-04-20 at 11:08 AM
2021-04-20 at 12:30 PM
Phae Warber says:
2021-04-20 at 12:40 PM
Thank you for your hard work and efforts!
ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်တောင် MWD & MRTV ကိုမုန်းသလဲဆိုတာ ကွန်မန့်တွေဖတ်ရတာနဲ့တင်သိနိုင်တယ်။
Khin Twal Tar says:
2021-04-20 at 1:05 PM
စော လမွန် says:
2021-04-20 at 1:08 PM
2021-04-20 at 2:50 PM
2021-04-20 at 11:28 PM